Taariikh Nololeedka Marxuum Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo Garoowe ku geeriyooday
Saturday April 20, 2019 - 14:17:36 in Wararka by
Allaha U Naxariistee Marxuum Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo xilal kala duwan horay uga soo qabtay kana mid ahaa aasaasayaashii Puntland ayaa saaka ku geeriyoodey magaalada Garoowe ee caasimadda Puntand.
Marxuumka oo ahaa shaqsi laga jecel yahay Puntland ayaa waxa uu waxbarashadiisii kadib ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada maadiga ah ee Soomaaliya kahor inta uusan ku soo biirin masraxa siyaasadda oo uu 15kii sano ee ugu dambeeyey ka dhex muuqdey.
Marxuumka ayaa abbaare 1952-dii ku dhashay degmada Jirriiban ee gobolka Mudug, wuxuuna waxbarashadiisa sare ku qaatay jaamacadda PSU ee Magaalada Garoowe oo uu ka dhigtay kulliyadda shareecada iyo qaanuunka, wuxuuna kamid ahaa ergooyinka aasaasay dowladda Puntland 1998-dii.
January 3-2009 Ilaa December 2013 wuxuu ahaa xildhibaan ahna gudoomiyaha (Afhayeenkii) barlamaankii dowladda Puntland ee xilligaasi.
Jan 29, 2014 ilaa Agoosto 7, 2017 wuxuu soo ahaa wasiirka holwaha guud iyo gaadiidka xukuumaddii Puntland ee madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Agoosto 7, 2017 ilaa 10 February 2019 waxaa uu ahaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda Puntland kahor inta uusan xilka ku wareejin wasiirka xilligaan.